Virtual Open Day | Dulwich College Yangon
Dulwich College Yangon invites you to their webinar
Friday, August72020 at 3:30 pm (+0630)
Greetings from Dulwich College Yangon
We are delighted that you wish to attend our Virtual Open Day, scheduled for:
- Friday,7August 2020
- 3:30 to 4:30 pm Myanmar standard time
It isagreat opportunity for you to view our award winning, purpose built campuses, meet our Head of College/Campus, talk to our academic staff, and hear what our students have to say about their experience at Dulwich.
We will also showcase the richness of student life, our online learning programme, and how the Dulwich Difference puts students at the heart of everything that we do.
Please sign up and we look forward to meeting you on the event day. Once you sign up,adetailed agenda andameeting invite/link, will be shared with you.
Meanwhile for more details about the event, please feel free to get in touch with our Head of Marketing, Mr. Alok Kapur at Alok.Kapur@dulwich-yangon.com.mm
Dulwich College Yangon မှ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ Virtual Open Day ကိုတက်ရောက်ရန် ဆန္ဒရှိသည့်အတွက် ဝမ်းသာမိပါသည်။ ပွဲအချိန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ရ ရက် သောကြာနေ့
- မြန်မာစံတော်ချိန် ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ် မှ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ်
ကျွနု်ပ်တို့၏ဆုရရှိထားသောကျောင်းဝင်းများကိုကြည့်ရှုရန်၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ Head of College/Campus တို့နှင့်ဆွေးနွေးစကားပြောဆိုရန်၊ သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ဆွေးနွေးရန်နှင့် Dulwich တွင်တက်ရောက်နေသောကျွနု်ပ်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ အတွေ့အကြုံများကိုနားဆင်ရန်အတွက် အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူ ကျောင်းသားဘဝအတွေ့အကြံုကြွယ်ဝမှုများ၊ ကျွနု်ပ်တို့၏အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးအစီအစဉ် နှင့် Dulwich Difference သည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ကျွနု်ပ်တို့ဆောင်ရွက်သမျှ၏အဓိကနေရာတွင်မည်သို့ထားရှိကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီး ထိုနေ့တွင် အားလုံးကို တွေ့ဆုံရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ မိဘအုပ်ထိန်းသူတို့စာရင်းပေးသွင်းပြီးသောအခါ အသေးစိတ်ပွဲအစီအစဉ်နှင့်အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း/လင့်ခ်ကို ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပွဲနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို ထပ်မံသိရှိလိုပါက ကျွနု်ပ်တို့၏ Head of Marketing ဖြစ်သူ Mr Alok Kapur ထံ alok.kapur@dulwich-yangon.com.mm သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ကာ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Detur Pons Mundo - Building Bridges to the World
Since 2003, enrolment at Dulwich College International schools has grown to more than 9,000 students hailing from more than 60 countries. The group now comprises ten schools in seven cities and four countries in Asia.